DIRTY JOHN: NETFLIX စီးရီးအသစ်ကမင်းနဲ့တူပေမယ့်အမှန်တရား - သတင်း
အခြေခံအားဖြင့်သင်ဟာ Netflix စီးရီးအသစ်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ပုံပြင်ပဲ
သငျသညျဒီနှစ်ယခုအချိန်အထိ Netflix က graced ခဲ့အများအပြားလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကို 'ခေါ်' လို့ခေါ်တယ် 'သင်အကြိုက်ဆုံး rom-coms များ၏ထိတ်လန့်စရာဗားရှင်း' နှင့် 'အစဉ်အဆက် creepiest ပြပွဲ။ ' ' ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် Steroid တွေအပေါ် Gossip Girl ပါ။ အများကြီးရှိခဲ့သည် ဒါကြောင့်ဒီလောက်ရယ်စရာဖန်ဆင်းသောသင်၌အချိန်လေး သို့တိုင်အလွန်စွဲလမ်းစေသည့်အရာ - Netflix ဒရာမာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခုစိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ယခုတွင်သင်၌ Netflix ဒရာမာ Dirty John ရှိနေပြီ၊ လူတိုင်းကပြောနေသည်။
Netflix စီးရီးအသစ်ဖြစ်သော Dirty John နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံးဤတွင်ပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါကသင် 2.0 ပဲ
Dirty John သည် Netflix ၏မူလစီးရီးဖြစ်ပြီးစီးပွါးရေးသမားအမျိုးသမီး Debra Newell ၏အမှတ်အသားဖြစ်သော John Meehan ၏လိမ်လည်မှုနှင့်ခြယ်လှယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမေ့ဆေးဆရာ ၀ န်ဂျွန်အားချစ်မြတ်နိုးသည်။ သူမချမ်းသာမီသို့မဟုတ်သူထွက်ပေါ်လာသည့်အတိုင်းအရည်အချင်းမပြည့်မှီကြောင်းထင်ရှားခြင်းမတိုင်မှီ။
အားလုံးအတူတူဖြစ်စဉ်များရှစ်ရှိပါတယ်, 40 ကနေ 50 မိနစ်အရှည်ကွဲပြား။ ဒီအစီအစဉ်ကို TV Thrillers, Drama Programs and Crime Programs အမျိုးအစားအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Dirty John သည်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အပေါ်အခြေခံပါသလား။
Netflix မှညစ်ညမ်းသောယောဟန်သည်စစ်မှန်သောရာဇ ၀ တ်မှုအပေါ်အခြေခံသည် နာမည်တူ podcast ။ Podcast ကိုဂျာနယ်လစ် Christopher Goffard နှင့် Los Angeles Times တို့ကတင်ဆက်သည်။
ဖြစ်ရပ်မှန်ကတော့ John Meehan, con artist နှင့် sociopath တို့၏ဘ ၀ အပေါ်အခြေခံသည်။ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ ဒေးတန်တက္ကသိုလ်မှသူ၏အတန်းဖော်များကသူ့ကို 'Dirty John' သို့မဟုတ် 'Filthy John' ဟူသောအမည်ပေးခဲ့သည်။ သူနှင့်သူအိပ်ခဲ့သည့်မိန်းကလေးများအကြောင်းကိုဝါကြွားလေ့ရှိပြီး၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်တွားသွားခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ တွင်သူ၏ပထမဇနီး Tonia Sells နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူမအသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီ၊ သူအသက် ၃၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့်သူမနဲ့သူ့မိသားစုကိုလိမ်ပြောပြီးသူက ၂၆ နှစ်ပါ။ သူတို့၌ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးအတူတူလက်ထပ်ပြီး ၁၀ နှစ်အကြာ Meehan ကသူမကွာရှင်းလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် Tonia Sells သည်သူ၏အသက်အရွယ်နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ပြောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူမမှာယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲချက်တွေရှိခဲ့ကြောင်း၊ သူမအတူတူနေတဲ့အိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါသူနာပြုဆေးရုံကသူခိုးယူခဲ့တဲ့ထုံဆေးဆေးတွေကိုသူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့် gf squirt ဘယ်လိုလုပ်လဲ
ရဲချုပ် mugshots မှ John Meehan
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ရဲများကဆေးရုံမှသေနတ်များဆောင်ယူခြင်းနှင့်ဆေးရုံမှမူးယစ်ဆေးဝါးများခိုးယူခြင်းအတွက်လည်းရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သူသည်သူနာပြုခွင့်လိုင်စင်ကိုချန်ခဲ့ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ သူသည်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သူ့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးခြောက်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ၁၇ လအကြာတွင်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည် Netflix စီးရီးများနှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားသော Debra Newell နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မည်သည့်သိသာသောဖျက်လိုဖျက်ဆီးသမားမဆိုသူသည်စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေသည်။
The Dirty John of cast list သည်
Debra Newell အဖြစ် Connie Britton
Netflix အပေါ် Dirty ယောဟနျအတွက် Connie
အဲရစ် Bana ကို John Meehan အဖြစ် (Dirty John)
ဂျူလီယာဂါနာသည် Terra Newell (ဒေဗရာ၏သမီး) ဖြစ်သည်။
? ဆွယ်တာအင်္ကျီရာသီဥတု? #trailerlife
မျှဝေသည် ဂျူလီယာဂါနာ 1:02 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 15, 2018 ရက်တွင် (@ juliagarner94)
Juno ဘုရားကျောင်း Veronica Newell (ဒေဗရာ၏သမီး) အဖြစ်
မျှဝေသည် Juno ဘုရားကျောင်း 8:56 pm တွင် PDT မှာဇွန် 15, 2017 ရက်တွင် (@junotemple)
Jean Smart Arlane Hart (ဒေဘရာ၏မိခင်) အဖြစ်
Netflix ရှိ Dirty John ရှိ Debra ၏မိခင် Arlane
Dirty John ကိုဘယ်တော့လွှတ်မလဲ။
Netflix တွင် Valentine's Day ၌ Dirty John ကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ သင်၏ကံကောင်းသည့်ကြယ်များကိုသင်တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်နေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်အကောင်းဆုံးသောစီးရီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအပေါ်စီးဆင်းရန်ရရှိနိုင်ပါသည် ယခု Netflix UK US ရှိ Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းသတင်းမရှိသော်လည်း Bravo တွင်လည်းဝယ်လိုအားရှိနေသည်။
ဒီလူတွေကိုငါအရမ်းကြိုက်တယ် @dirtyjohnbravo ၏နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကိုအခြားမည်သူကြည့်ရှုခဲ့သနည်း။
မျှဝေသည် ဂျူလီယာဂါနာ 4:16 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 17, 2019 ရက်တွင် (@ juliagarner94)
ယခုအချိန်တွင် Netflix တွင်ရရှိနိုင်သည့်အခြားပြပွဲများ
နှစ်သစ် မှစ၍ Netflix သည်အချို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် အကောင်းဆုံးစစ်မှန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် အဖြစ်ယနေ့အထိ, ရိုးရိုး Sight အတွက်ပြန်ပေးဆွဲ နှင့် အဆိုပါ Ted Bundy တိပ်။ ဒီလိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေလည်းရှိခဲ့တယ် Fyre ပွဲတော် doc နှင့်ကဲ့သို့သောအခြားစီးရီး လိင်ပညာရေး နှင့် မင်း ။
• Netflix ပေါ်ရှိသင်၏ရာသီ (၂) မှာအတည်ပြုသည်။ ဒီမှာငါတို့သိသမျှ
• ဤရွေ့ကား 19 Plain Sight memes အတွက်ပြန်ပေးဆွဲရုံဤမျှလောက် sickeningly အစက်အပြောက်ဖြစ်ကြသည်